Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kweCzech Republic kanye neGolden Visa
Sinikeza Izinsizakalo Zokufuduka Kwezomnotho eCzech Republic:
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic
● Ubuzwe ngokutshalwa kwemali kusuka eCzech Republic
● I-visa yegolide eCzech Republic
● Iphasiphothi yesibili evela eCzech Republic
● Ukuhlala ngokutshala imali eCzech Republic ngokutshala imali kwizakhiwo nezindlu
Khipha ku-internet Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eCzech Republic kanye nabameli be Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCzech Republic kanye nabathengisi bezinhlelo zokuhlala izindlu eCzech Republic basebenza ngokubambisana ekuvikeleni kwamakhasimende.
Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali eCzech Republic kunikela ngezinsizakalo zokuhlala ngokutshalwa kwezimali eCzech Republic, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eCzech Republic, ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eCzech Republic, ukuhlala kabusha kwesibili ngokutshala imali eCzech Republic, ukuhlala kabili ngokutshala imali eCzech Republic, ubuzwe kanye nokuhlala ngokutshala imali e-Czech Republic, ukuhlala unomphela ngokutshala imali e-Czech Republic, ukuhlala okwesikhashana ngokutshala imali e-Czech Republic, ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali e-Czech Republic, ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali e-Czech Republic, Ubuzwe ngokutshala imali e-Czech Republic, Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali izinhlelo eCzech Republic, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eCzech Republic, ubuzwe besibili ngokutshala imali eCzech Republic, ubuzwe bobabili ngokutshala imali eCzech Republic, ukuhlala nobuzwe ngokutshala imali eCzech Republic, ukuhlala kanye nokuba yisakhamuzi ngokutshala imali eCzech Republic, izinhlelo zobuzwe eCzech Republic , Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eCzech Republic, Ubuzwe ngezikimu zokutshala imali eCzech Republic, ipasipoti yesibili eCzech Republic, izinhlelo zepasipoti zesibili eCzech Republic, uhlelo lwesibili lwamaphasipoti eCzech Republic, iphasiphothi yesibili eCzech Republic, ukuhlala kanye nepasipoti yesibili eCzech, IRiphabhlikhi, ipasipoti yesibili yeziphathamandla eCzech Republic, ipasipoti yesibili ngokutshala imali eCzech Republic, ipasipoti yesibili yobuzwe eCzech Republic, uhlelo lwesibili lwamaphasipoti eCzech Republic, izinhlelo zepasipoti yesibili eCzech Republic, i-visa yegolide eCzech Republic, ama-visa egolide eCzech Republic, Izinhlelo ze-visa zegolide eCzech Republic, uhlelo lwe-visa egolide eCzech Republic, i-visa yesibili yegolide eCzech Republic, uhlelo lwesibili lwe-visa egolide eCzech Republic, i-visa egolide kabili eCzech Republic, ubuzwe kanye ne-visa yegolide eCzech Republic, ukuhlala kanye ne-visa yegolide eCzech, IRiphabhulikhi, isakhamuzi se-visa segolide eCzech Republic, uhlelo lwe-visa egolide eCzech Republic, izinhlelo ze-visa zegolide eCzech Republic.
"1 stop solutions" yakho yonke i-Residency yakho ngokutshala imali eCzech Republic ngokuxhaswa okwengeziwe.
Ukutshalwa Kwezimali Okuncane eCzech Republic Kokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali: EUR 2,850,000
Isingeniso ICzech Republic kanye nokuhlala kabusha ngotshalomali
ICzech Republic ingemajini ebanzi ingenye yeziphikiso ezikhanga kakhulu eMpumalanga Yurophu zokukhishwa inyumbazane. Ucebe ngamasiko namasiko futhi waziwa ngendalo yawo ekhazimulayo nezindawo zokungcebeleka ezishibilika eqhweni, unikeza isimo sezulu esihle nendlela yokuphila kubantu abangaziwa abajwayele ukuhlala lapha, futhi okunezinhlobonhlobo zamathuba ochwepheshe. IsiCzech sikhulunywa kuso sonke isizwe, sishintsha ngokuncoma noma ngolimi oluthile kuqala ngesifunda esisodwa kuye kwesinye. Ulimi lusebenzisa izinhlamvu zesiLatin ngokulandelana futhi lufana nolimi lwesiSlovak 'akusilo mhlawumbe ulimi oludinga kakhulu ukufunda' kepha izakhamizi zaseCzech zingomakhelwane ngabantu abathanda ukujwayelana nolimi lwabo ukuze bakhulume beya behlisa kancane kuhle ukukuhlangabeza phakathi nendawo.
ICzech ibazisa kakhulu ubuhlobo bomndeni. Abanakekeli, izingane kanye nogogo bahlala bethola ithuba lokwenza isikhathi esilahlekile kanye nezidlo zakusihlwa zomndeni kubalulekile endleleni yokuphila ejwayelekile. Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kwesimanje nezinguquko eziningi esikhathini eside esizayo, imindeni inokubaluleka okukhulu enkambisweni yansuku zonke yamaCzech. Izindleko zokutholwa eCzech Republic ziphansi ngokwedlulele nezizwe ezisentshonalanga yeYurophu, kanti iPrague ithobeke impela maqondana nezindawo ezisemadolobheni amakhulu aseYurophu. Izindleko ezijwayelekile ezijwayelekile zezinto eziyisisekelo zabafundi baseCzech Republic cishe zingama-400 EUR njalo ngenyanga ngokusobala, kuncike ezindleleni zakho zokuphatha imali.
Lokhu kufaka phakathi okulula, ukudla, kanye nezokuthutha. Izindleko zingahluka njengoba kukhonjisiwe ngendawo yakho. ICzech Republic inomhlangano omude wesikole esihle. Ikolishi eliyinhloko laseCzech, iCharles University ePrague, lasungulwa e1348 njengekolishi eliyinhloko eYurophu Ephakathi. Uhlaka lokuphenya lwaseCzech luyasebenza futhi nge-ECTS (i-European Credit Transfer System), ngakho-ke amakhredithi owatholayo ezifundweni oziphasayo adluliselwa kwamanye amanyuvesi aseYurophu. Izinhlangano eziningi zomhlaba wonke zinabasizi bazo nezindawo abasebenza kuzo eCzech Republic, ngakho-ke ngeke udinge ukukhathazeka ngokungabi namsebenzi ngemuva kokuqeda izivivinyo zakho. Izinhlangano eziningi ngokwengeziwe zinikeza izikhundla ezingeni lokungena zabafundi okungaba ukusekelwa okungavamile kobuchwepheshe! Kuyisisekelo ngokwengeziwe sabafundi abangajwayelekile ukunikeza izivivinyo zolimi lolimi lwabo lwendabuko okungaba umthombo osizayo wemali engenayo eseceleni.
Kuyisizwe sesi-6 esiphephe kunazo zonke emhlabeni. Inokudla okumangalisayo, i-lager, abantu abakhulu futhi futhi iyisiqalo sokuqala esingavamile sokuzungeza iYurophu. Njengomphumela wendawo egxile kuyo, uzoba nethuba lokuvakashela izizwe nezindawo zasemadolobheni ongeke uphinde uthole ithuba lokuvakasha futhi. Awekho amathuba athile enhlalakahle yabantu abaphuma phambili e-Czech Republic. Uma ugula, noma kunjalo, asikho isizathu esicindezelayo sokuxineka, njengoba amahhovisi ezinsizakalo zezokwelapha ingxenye enkulu enikeza okulindelwe okukhethekile kokwelashwa nokunakekelwa. IRiphabhlikhi yaseCzech inohlaka oluhloniphekile lwemitholampilo yomphakathi neyangasese kanye nemikhuba yochwepheshe, futhi wonke umuntu osetshenziswayo esizweni ngenxa yalokho uphenduka abe ngumuntu ovela ohlakeni jikelele lokuhlinzekwa kwezokwelapha. Ezinye izinhlangano ezinkulu zomhlaba zingakunika uhlelo lokuvikela ezempilo oluyimfihlo kunokuba, noma kunjalo, umshwalense jikelele wenhlalakahle. Lokhu mhlawumbe kungezinye zezinto ezibalulekile ozoba nazo njenge-ex-pat, futhi lezo izindleko ezijwayelekile zezinto eziyisisekelo. Ihluke kakhulu futhi iningi lamazwe aseYurophu, iCzech Republic izobe ingaphansi kakhulu maqondana nezindleko zemikhiqizo nezinsizakalo ezijwayelekile. Uma uhlela ukungena ebhizinisini eCzech Republic, okuhle kulokhu ukuthi kulula kakhulu ukusetha nokuqala. Zimbili izindlela ongazithatha, eyodwa kube i-SRO lapho zonke izibopho zithathwa kuwe, noma uthenga imvume yokuhweba futhi uvume noma yiziphi izikweletu ngokwakho. Konke lokhu kulula, uma ungakhuluma ngamashidi okufanele ukhulume nawo. Enye yama-engeli amahle kakhulu nokuhehayo kweRiphabhulikhi yaseCzech umphakathi omemezayo futhi ochumayo wesizwe sonke. Kukhona kuzo zonke izimo izinqwaba zemisebenzi nezinqwaba zamabala okufanele zihanjwe. Kungakhathalekile ukuthi ukuwo yini amakilabhu nezindawo zokudlela, noma uncika kokuzivocavoca okwengeziwe ngaphandle, akukho ukuntuleka kokuvivinya umzimba eCzech Republic.
Impilo eCzech Republic
Njengoba inabantu abaningi abanamasiko amaningi, iCzech Republic njengamanje inengxenye enkulu yabantu bangaphandle abayi-1,000,000 XNUMX XNUMX abahlala emaphethelweni ayo.
ICzech Republic idume ngokulaja kwayo; isizwe siphethe isihloko sokusetshenziswa kophuzo okuphawuleka kakhulu ngomuntu ngamunye emhlabeni wonke eminyakeni engama-23 edlule!
Isizwe sinokulindela okuphezulu kokunakekelwa kwezokwelashwa, ngokwezinga namanye amazwe amaningi aseYurophu. Ukuqeqeshwa kombuso kuyalwa ngokuphelele eCzech, ama-ex-pats angapheli anquma ukuthumela izingane zawo ezikoleni zomhlaba wonke.
Umlando wesiphepho waseCzech Republic, ikakhulukazi ushintsho olusuka embusweni wobusoshiyali luye ohlelweni olukhululekile olusekelwe kumavoti ku-50% wesibili wekhulu lamashumi amabili, selakhe izwe futhi lashiya isici salo esizweni, sakwenza kwaba yinhloso ethokozisayo emphakathini. I-athikili yethu inikeza umdwebo omfushane wangemuva komlando weCzech Republic futhi inikeze imininingwane ethile ebalulekile yezenhlalo ukuze izenzele phansi lapho.
Imininingwane eyisisekelo yokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kweCzech Republic
Utshalomali oluncane lwe Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic
Icubungula isikhathi sokuhlala ngokutshala imali kweCzech Republic
Ngemuva kwengqikithi yeminyaka eyi-10 yokuphila
Ubuzwe obubili buvunyelwe izakhamizi zaseCzech Republic
Izinketho Zokutshalwa Kwezimali ze Ukuhlala kabusha ngokutshala imali kweCzech Republic
Kungani kufanele ube yi-Residency ngokutshala imali eCzech Republic
ICzech Republic, isenkabeni yeYurophu futhi iyilungu eligcwele le-EU neSchengen Zone. Ubuhle bemvelo obumangalisayo bezwe buyaziqhenya ngezintaba, izintaba nemifula. Isikhungo esidume umhlaba wonke senhlokodolobha yasePrague sibe wumgogodla wamafilimu amaningi evidiyo.
ICzech Republic isanda kwethula uhlelo oluyingqayizivele lokuhlala abantu begolide olubhekise kubatshali zimali abanohlonze abazonikela emnothweni wezwe. Uhlelo lunesikhathi esifushane kakhulu kumtshalizimali wasekhaya kanye nemvume yokuhlala kwamalungu omndeni wabo. Ngaphezu kwalokho, akukhona konke ukutshalwa kwezimali okufanele kutholakale ngokheshi. Ezinye izimpahla zingafika kuma-60%.
Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eCzech Republic
Abantu bemvelo nezinkampani bobabili banelungelo lokufaka isicelo se-visa yokutshala imali. Abaqondisi abaphezulu abafika kwabangu-5 bayayithola imvume yokuhlala lapho utshalomali eyinkampani. Ama-visa okutshalwa kwezimali ahlala kuze kube yiminyaka engu-2 ayatholakala kubaninimasheya abangahambi.
Izikhathi zokucubungula zifushane ngokweqile: abatshalizimali bangathola imvume yabo yokuhlala phakathi nezinsuku ezingama-30 kuye kwezingu-45 zokuletha yonke imibhalo edingekayo.
Enye inzuzo yokuba ngumtshalizimali waseCzech ohlala ezweni eligolide ukuthi abafakizicelo bangafaka izicelo zabo kwinxusa laseCzech lezwe abahlala kulo njengamanje.
Abafakizicelo abahlala eCzech Republic futhi abafuna ukushintsha imvume yabo yokuhlala bangafaka isicelo ngqo kuMnyango Wezangaphakathi ..
Labo abafisa ukuthola indawo yokuhlala unomphela eCzech bangakwenza lokho ngemuva kweminyaka emi-5 yokuhlala ngokuqhubekayo․ Ubuzwe baseCzech bungatholakala ngemuva kweminyaka eyi-10 uhlala ezweni.
Izidingo zezezimali zeCzech Republic
Kunezimfuneko ezi-3 okufanele zigcwaliswe ukuze kufakwe isicelo esiphumelelayo:
Dala okungenani imisebenzi engama-20 yesikhathi esigcwele yokuhlala (yezakhamizi ze-EU);
Ukutshalwa kwemali okungenani kwe-CZK 75 million (cca. EUR2,850,000) kufanele kwenziwe. Kufika kuma-60% otshalo-mali anganikezwa kwezinye izimpahla: izindlu ezithengiswayo, indlela yokwazi noma okokusebenza komzimba;
Isicelo kumele silandelwe uhlelo lwebhizinisi.
Ukusekelwa kwamakhasimende ngokuhlala kabusha ngokutshala imali kweCzech Republic
Ithimba lethu le- Indawo yokuhlala Ngabenzeli Bokutshalwa Kwezimali baseCzech Republic futhi Indawo yokuhlala Ngokutshalwa Kwezezimali Abameli ye-Czech Republic inikeza amaklayenti nemindeni yawo eCzech Republic ukwesekwa kobuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eCzech Republic, ukuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela eCzech Republic namanye amathuba okutshalwa kwezimali kwamanye amazwe, emazweni angama-37.
Izinsizakalo zethu azigcini nje ngokuhlala ngokutshala imali okuvela eCzech Republic noma eGolden Visa yaseCzech Republic noma ubuzwe ngokutshalwa kwemali kusuka eCzech Republic noma ipasipoti yesibili, futhi sisiza emathubeni amahle kakhulu okutshala izindlu nomhlaba eCzech Republic, nokunikeza isisombululo esigcwele uma ufuna ukusungula inkampani eCzech Republic noma olwandle, izinsiza zabantu eCzech Republic nokunye okuningi, okubandakanya ukuhlelwa kwezezimali nokunye okuningi.
Ukusiza amaklayenti ethu ngezixazululo ezisuselwe ekubeni yisakhamuzi e-Czech Republic nasendaweni yokuhlala yesibili.
Ukusekelwa Okukhethekile Kwezakhamizi ZaseCzech Republic:
Sinikeza okungabizi Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali kweCzech Republic, ngokusebenzisa okungabizi kwethu ifemu yomthetho wokutshalwa kwezimali kanye nowokufika IRiphabhlikhi yaseCzech, abameli bezimali zokufuduka abafinyelelekayo baseCzech Republic, Indawo yokuhlala engabizi ngabacwaningi bezotshalomali baseCzech Republic, Indawo yokuhlala engabizi ngabameli bezokutshalwa kwezimali baseCzech Republic kanye nenkampani yababizi bokufika efinyelelekayo yeCzech Republic
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kusuka eCzech Republic kuya emazweni angama-37.
I-visa yegolide eCzech Republic emazweni angama-37.
Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali kusuka eCzech Republic kuya emazweni angama-37.
Iphasiphothi yesibili isuka eCzech Republic iya emazweni angama-37.
Ukuthuthela Kwamabhizinisi Kususelwa e-Czech Republic kuya emazweni we-106.
Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali ezivela eCzech Republic.
Izinhlelo ze-Golden visa eCzech Republic emazweni angama-37.
Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali ezisuka eCzech Republic ziye emazweni angama-37.
Izinhlelo zepasipoti lesibili ezisuka eCzech Republic ziya emazweni angama-37.
Izinhlelo zebhizinisi lokuthuthela kwelinye izwe ezisuka eCzech Republic ziya emazweni angama-106.
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kweCzech Republic ngeReal Estate
Sinikeza ukusekelwa kokutshalwa kwezindlu ku-Czech Republic ngombono wokuthi iklayenti kufanele lithole inzuzo enhle ekutshalweni kwemali eCzech Republic, noma nini, lapho bafuna ukuphuma ekutshalweni okwenziwe yi-Residency yabo ngokutshala imali kweCzech Republic. Sibophelene nabathuthukisi bezindlu abambalwa kakhulu eCzech Republic abanerekhodi elihle futhi impahla yabo isezindaweni ezinhle eCzech Republic, ilanda izimbuyiselo ezinhle kakhulu.
Izinhlelo ezinhle kakhulu zokuhlala kwempahla eCzech Republic ngotshalomali kwempahla yangempela eCzech Republic.
Udinga ukwazi - ICzech Republic Residency by Investment
Ukuhlala kabusha ngummeli wezokutshalwa kwezimali eCzech Republic kuzonikeza ngosizo oluningi lwemibhalo ngokuhlala kwakho ngempumelelo ngokutshala imali eCzech Republic. Izinsizakalo zethu ezijwayelekile zokuhlala ngokutshala imali eCzech Republic zifaka:
Abameli bethu bazoqonda izidingo zakho zokufuduka eCzech Republic noma eCzech Republic, ngokuya ngokuthi iziphi iziphakamiso ezizokwenziwa
Senza inkuthalo yokuqala efanelekile, ukulungiselela umbiko ngaphambi kokuncoma ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic kumakhasimende ngokuthola imvume yokuhlala eRiphabhulikhi yaseCzech nokunciphisa ubungozi bokwenqaba.
Ngokuya ngombiko wokukhuthala okufanele weCzech Republic, sincoma nezinye izinhlelo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubekele phambili nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutshala imali eCzech Republic sizodinga amakhophi askeniwe epasipoti yamakhasimende namalungu omndeni.
Ukuhumusha kanye ne-apostille yemibhalo Ukuhlala kabusha ngokufaka isicelo sokutshala imali eCzech Republic. Abameli bethu abakhethekile bokuhlala ngokutshala imali eCzech Republic kanye ne-visa yegolide bazosiza ngokugcwalisa amafomu nemibhalo.
Uma imibhalo yakho neyomndeni wakho yokuhlala ngokufaka isicelo sokutshala imali eCzech Republic seyilungile, sizoyigcwalisa ngeziphathimandla ezifanele zaseCzech Republic.
Lapho nje isicelo sakho sokuhlala ngokutshalwa kwezimali kweCzech Republic sesamukelwe, sihlanganyela izindaba ezinhle nawe bese siqala ukulungiselela ezinye izesekeli.
Asisekeli noma sihlinzeke ngokuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali eCzech Republic kubantu ababalulwe ngezansi noma amabhizinisi aseCzech Republic:
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eCzech Republic azinikelwa kubahwebi noma abasabalalisi bezingalo nezinhlamvu ezivela noma eziya eCzech Republic.
Indawo yokuhlala ngezinhlelo zokutshala imali zeCzech Republic ahlinzekelwa ukubhekwa kwezobuchwepheshe eCzech Republic noma ubuhloli bezimboni bezinhlelo zokutshala imali ngaphakathi noma kusuka noma kuya eCzech Republic.
Indawo yokuhlala ngokubonisana ngokutshalwa kwezimali kweCzech Republic ahlinzekwa nganoma yimiphi imisebenzi engekho emthethweni noma yobugebengu eCzech Republic.
Indawo yokuhlala ngokusekelwa kotshalomali ye-Czech Republic akukhona okwabantu abasebenza ngezinto ze-Genetic eCzech Republic.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eCzech Republic akukhona okwamabhizinisi asebenzelana ngezikhali eziyingozi noma eziyingozi zebhayoloji noma izikhali zenuzi eCzech Republic.
Indawo yokuhlala ngohlelo lokutshala imali ukusekelwa kweCzech Republic akutholakali kubantu baseCzech Republic abasebenza ngokuhweba, ukugcina eCzech Republic, noma ukuthuthwa kwezitho zomuntu.
Indawo yokuhlala ngokutshala imali ye-Czech Republic akuyona eyezinkampani zokutholwa ezingekho emthethweni.
Indawo yokuhlala insiza yezinhlelo ye-Czech Republic akuzona ezezenkolo namahlelo azo okusiza eCzech Republic.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ku I-Czech Republic ayinikezwanga kubantu abasebenzelana nezithombe zobulili ezingcolile eCzech Republic.
Ukuhlala kwethu abameli eCzech Republic awasekeli ukuhweba ngebhizinisi ngezinto zezidakamizwa eCzech Republic.
“Isaziso Esibalulekile : IMM Solutions INC ithatha ukuqaphela okunengqondo ukucacisa imibhalo ye-AML yamakhasimende e-Czech Republic kanye ne-KYC yabo kepha asemukeli noma imiphi imithwalo yemfanelo yanoma ikuphi ukwenqatshwa yiziphathimandla eCzech Republic ukuze kuvunyelwe isicelo Indawo yokuhlala ngokutshalwa kwemali eCzech Republic.
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic nakwamanye amazwe, kanye nokunye okuningi okusekelwayo.
Sinikezela ngokuhlala okuhle kakhulu ngokusekelwa kokutshalwa kwezimali eCzech Republic ngokutshalwa kwezimali, ukuthuthela kwamanye amazwe kanye nokuhlelwa kwezindlu eCzech Republic.
Isekelwa yi-Residency yamazwe omhlaba ngesipiliyoni sokutshala imali kanye nezimfuneko zomthetho waseCzech Republic, sakha izixazululo ezinhle kakhulu
I-Residency yethu ngezinsizakalo zokutshala imali eCzech Republic inikela ngamanani ashibhile, ngenani lempumelelo elingafinyeleleka kangcono leCzech Republic.
Sithathe isipiliyoni seminyaka yokuHlala okuMbili eCzech Republic sisekela amaklayenti nemindeni yawo ngeCzech Republic.
Ukuhlala Okuhlangenwe nakho ngabaceli bokutshala imali baseCzech Republic nabasebenzeli bezomthetho baseCzech Republic abanikeza ukusekelwa kumakhasimende.
Sinabaceli abahle kakhulu nabameli beCzech Republic abaphatha inqubo nokusetshenziswa abazibophezele empumelelweni yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eCzech Republic nangemva kokuvunywa, ilungu leqembu lethu eliphakeme lizoba khona ngebhizinisi noma ukusekelwa komuntu siqu kweCzech Republic
Sinokuhlangenwe nakho kwamazwe omhlaba e-Residency ngokutshala imali kufaka ne-Czech Republic, sisiza amaklayenti avela emhlabeni wonke ngezinsizakalo ezihamba phambili.
Uma kwenzeka, ukuhlala kwakho ngokutshala imali eCzech Republic kwehluleka, kunamanye amazwe angama-36 esiwahlinzekayo, sikulungele ngohlelo B.
Bala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuya eCzech Republic
Ukubala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali kweCzech Republic sicela ugcwalise yonke imininingwane kufaka phakathi amalungu omndeni kanye neminyaka yabo. Ngenxa yenani elikhulu lamakhasimende eCzech Republic, siyakwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono ngezindleko eziphansi. Izibalo zizofaka phakathi izindleko zokuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali lweCzech Republic nezinye izindleko.
izinhlobo I-visa ye-Czech Republic
Inqubo Yezimvume Zokusebenza zeCzech Republic
Indawo yokuhlala okwesikhashana e-Czech Republic
Indawo yokuhlala unomphela eCzech Republic
Ukuba yisakhamuzi saseCzech Republic
AmaNxusa kanye Namanxusa AseCzech Republic
Izintela eCzech Republic
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic nakwezinye izinsizakalo
Sibhale phansi izinsizakalo ezimbalwa esizinikeza eCzech Republic ngezidingo eziseduze noma ezizayo.
Uma uhlela ukuthuthela nomndeni wakho eCzech Republic ngokutshala imali, thina njengomlingani wakho weCzech Republic, sikhona ukuhlinzeka ngeminye imisebenzi eminingi nangendlela ongadinga ngayo eCzech Republic ngamanani aphansi.
Ngaphandle kwe-Residency ngokubonisana ngokutshala imali eCzech Republic, sihlinzeka ngezinsizakalo zebhizinisi, i-IT ne-HR naseCzech Republic, ongayitholi ngaphansi kwesambulela esisodwa esinikezwe abanye abaxhumanisi beCzech Republic abasenza isitolo esisodwa seCzech Republic namazwe ayi-106. .
"Sitshale iminyaka eminingi ye-experimentania nasemhlabeni jikelele emazweni angama-106 ukusiza imindeni, abantu ngabanye kanye nosomabhizinisi baseCzech Republic ekufezeni izinhloso nezifiso zabo."
Sisekela indlela yamakhasimende ethu edlula i-Residency ngokutshala imali eCzech Republic ngosizo lwabameli bethu, ababonisi bethu kanye nababoshiwe eCzech Republic nakwamanye amazwe.
Inkampani eCzech Republic
Singakusiza bhalisa inkampani eCzech Republic noma Amazwe ase-Offshore namazwe ayi-106 (Izindleko zokubhalisa inkampani eCzech Republic zishibhile nathi.)
I-Akhawunti Yasebhange eCzech Republic
Noma yimuphi umtshalizimali othuthela eCzech Republic uzodinga i-akhawunti yasebhange yomuntu siqu eCzech Republic ne-akhawunti yasebhange yenkampani eCzech Republic, singasiza futhi ngama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle.
Isango lokukhokha eCzech Republic
Uma kwenzeka udinga ukubonisana eCzech Republic, ngoba izixazululo zokukhokha zedijithali eCzech Republic njengesango lokukhokha lendabuko noma le-fintech eCzech Republic noma izixazululo ze-crypto, sazise.
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuze ICzech Republic uma uhlela qala ibhizinisi ngokuthenga ibhizinisi elikhona eCzech Republic ukuqala ngokushesha eCzech Republic.
Imisebenzi Yezabasebenzi eCzech Republic
Our inkampani yezabasebenzi eCzech Republic ingakusiza ngokuqashwa okusheshayo. Nawe unga post izikhala eCzech Republic free.
Izinombolo zefoni ezibonakalayo zeCzech Republic
Izinhlelo zebhizinisi zeCzech Republic kanye ne izinombolo ezibonakalayo zeCzech Republic Amazwe ayi-102 namadolobha angama-291.
Imisebenzi Yezokuhlela Kwezimali eCzech Republic
Ukubalwa kwezimali, ukukhuthala okufanele eCzech Republic nase okuningi.
Ikheli lehhovisi elibonakalayo eCzech Republic
Ukusetha ibhizinisi eCzech Republic
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic, isethaphu ibhizinisi ku I-Czech Republic.
Sinikezela ngezixazululo ze-IT ezingezansi eCzech Republic
Ukwakhiwa Kwewebhu eCzech Republic
Ukuthuthukiswa Kwezentengiselwano eCzech Republic
Ukuthuthukiswa kwewebhu eCzech Republic
Ukuthuthukiswa kweBlockchain eCzech Republic
Ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza eCzech Republic
Ukuthuthukiswa Kwesoftware eCzech Republic
I-SEO eCzech Republic
Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eCzech Republic
Sihlinzeka ngokuhlala ngokusemthethweni ngokusetshenziswa kwezixazululo zoTshalomali eCzech Republic futhi impumelelo yamakhasimende ethu ibaluleke kakhulu, eCzech Republic, singabaholi, inkampani yethu yabameli eCzech Republic inezinhlaka ezihamba phambili zabokufika naseCzech Republic, sinedumela lokuletha izinsiza ezihamba phambili zamakhasimende isipiliyoni seCzech Republic ezinezixazululo ezicacile zokutshala imali zabantu baseCzech Republic kanye nemindeni yabo. Ukuhlala kwethu ngethimba lokutshala imali eCzech Republic kunikeza izixazululo ezenziwe ngobuhlakani zempumelelo yeKlayenti.
Amalungu akho omndeni (izingane, unkosikazi, abazali) ayayifanelekela imvume yokuhlala eCzech Republic, lapho imvume yakho yokuhlala eCzech Republic ivunywa.
Amandla wommeli weCzech Republic ayadingeka kuzo zonke izinyathelo zomthetho ezenzelwe wena yi-Residency ngabameli bezokutshalwa kwezimali eCzech Republic. Uma useCzech Republic noma uhlela ukuvakashela iCzech Republic, singawathola amandla akho ommeli lapha.
Asikhokhisi imali ethe xaxa ngokuthola Amandla obumeli. Uma uhlela ukuqala ukubhaliswa kwenkampani kweCzech Republic ukude, amandla akho abameli kufanele abhaliswe ngokusemthethweni ukuthi asetshenziswe endaweni yaseCzech Republic. Ngokuya ngezwe ohlala kulo, kufanele ngabe ligcotshwe noma livunyelwe ngokomthetho yi-consulate yaseCzech Republic.
Imibuzo Ebuzwa Njalo - Ukuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eCzech Republic
Iyini incazelo yokuhlala ngokutshala imali eCzech Republic?
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic, kungachazwa njengokuthola indawo yokuhlala yaseCzech Republic ngokutshala imali kwezomnotho waseCzech Republic ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengebhizinisi, izindlu, izibopho zikahulumeni, njll. Faka isicelo sokuhlala ngokutshala imali eCzech Republic, ukuhlala ngo Uhlelo lokutshalwa kwezimali lweCzech Republic lusekelwa ukuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eCzech Republic, ngokuhlala kwethu okuhle ngabameli bezotshalomali eCzech Republic, indawo yokuhlala engcono ngabameli bezokutshalwa kwezimali eCzech Republic kanye nokuhlala okuhle kakhulu ngabaluleki bezokutshalwa kwezimali baseCzech Republic, abasebenza kahle kakhulu ngokutshalwa kwezimali amanxusa eCzech Republic, kanye namafemu amahle okubonisana nabokufika eCzech Republic.
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali eCzech Republic | Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezimali eCzech Republic | Ukuhlala kabusha ngabameli be-Investment eCzech Republic | Ukuhlala kabusha ngabameli bokutshala imali eCzech Republic | Ukuhlala kabusha ngabacwaningi bokutshala imali eCzech Republic
Iyini incazelo yokuba yisakhamuzi ngokutshala imali eCzech Republic?
Ukuba yisakhamuzi ngokutshala imali eCzech Republic, kungachazwa ngokuthi, ukuthola ubuzwe beCzech Republic ngokutshala imali kwezomnotho waseCzech Republic ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengebhizinisi, ingcebo, izibopho zikahulumeni, njll eCzech Republic. Faka isicelo sobuzwe ngokutshala imali eCzech Republic, ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eCzech Republic olwesekelwa ubuzwe ngezinsizakalo zokutshala imali eCzech Republic, ngobuzwe bethu obuhle ngabameli bezokutshalwa kwezimali eCzech Republic, ubuzwe obuhle ngabameli bezokutshalwa kwezimali eCzech Republic nobuzwe obuhle ngokutshalwa kwezimali ababonisi beCzech Republic, abasebenza njengezakhamuzi ezihamba phambili ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali eCzech Republic, kanye nezinkampani ezihamba phambili zokubonisana nabokufika eCzech Republic.
Izinsizakalo zokungena kwabatshalizimali ezingabizi eCzech Republic | Ababizi bezokufika abangabizi eCzech Republic | Abameli abangabizi bezimali zokufuduka kwabatshalizimali eCzech Republic | Abameli abangabizi bezimali zabokufika eCzech Republic | Izeluleko zabatshalizimali ezifinyelelekayo zeCzech Republic | Amafemu omthetho wokufuduka afinyelelekayo eCzech Republic
Iyini incazelo yepasipoti yesibili eCzech Republic?
Iphasiphothi yesibili eCzech Republic, ingachazwa ngokuthi, ukuthola ubuzwe obusemthethweni beCzech Republic ngokutshala imali kwezomnotho waseCzech Republic ngezindlela ezahlukahlukene ezinjenge, ingcebo, ibhizinisi, amabhondi kahulumeni, njll. Faka isicelo sepasipoti yesibili eCzech Republic, uhlelo lwesibili lwephasiphothi ICzech Republic isekelwa izinsizakalo zepasipoti zesibili zeCzech Republic, ngabameli bethu besibili abahamba phambili bephasiphothi eCzech Republic, abameli bamaphasiphothi besibili abahamba phambili eCzech Republic nabacebisi abahamba phambili bephasipoti besibili eCzech Republic, abasebenza kuma-passport wesibili ahamba phambili eCzech Republic, futhi abahamba phambili amafemu abonisana nabokufika eCzech Republic.
Izinsizakalo zepasipoti zesibili zeCzech Republic | Abameli bamaphasipoti wesibili eCzech Republic | Abameli bepasipoti besibili eCzech Republic | Abameli bepasipoti besibili eCzech Republic | Ababonisi bepasipoti besibili baseCzech Republic
Iyini incazelo ye-visa yegolide eCzech Republic?
I-visa egolide eCzech Republic, ingachazwa njengokuthola imvume yokuhlala eCzech Republic ngokutshalwa kwezimali emnothweni waseCzech Republic ngokusebenzisa izindlela ezahlukahlukene ezinjengamabhondi kahulumeni, ibhizinisi, izindlu nomhlaba, njll. Faka isicelo se-visa yegolide eCzech Republic, uhlelo lwe-visa legolide I-Czech Republic isekelwa izinsiza ze-visa zegolide zeCzech Republic, ngokusebenzisa abameli bethu abahamba phambili be-visa baseCzech Republic, abameli abangcono kakhulu be-visa baseCzech Republic kanye nabeluleki abahamba phambili be-visa baseCzech Republic, abasebenza kuma-visa wegolide ahamba phambili eCzech Republic, futhi abahamba phambili amafemu abonisana nabokufika eCzech Republic.
Izinsizakalo ze-visa zegolide zeCzech Republic | Abameli bama-visa egolide eCzech Republic | Abameli begolide begolide eCzech Republic | Abameli bama-visa egolide eCzech Republic | Ababonisi be-visa begolide baseCzech Republic
Yiluphi utshalomali oluncane lwe-Residency ngokutshala imali eCzech Republic?
Ukutshalwa kwemali okuncane kokuhlala ngokutshala imali eCzech Republic kungu-EUR 2,850,000.
Ingabe uyayinikeza ukusekelwa okusemthethweni kweCzech Republic for Residency ngokutshala imali?
Yebo, ummeli wethu eCzech Republic kanye nabasebenzeli baseCzech Republic banikela ukwesekwa kwe-Residency ngokutshala imali eCzech Republic.
Ngabe ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic kuyabiza?
Izindleko Zokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali e-Czech Republic kanye ne-Residency ngezidingo zesikhwama sokutshala imali se-Czech Republic ezabantu abakhulu, sibiza imali yokubonisana kuphela nge-Residency by Investment to Czech Republic, siphinde sinikeze nezinye izesekeli eziningi ze-Residency ngezixazululo ze-Investment.
Iziphi izakhamizi zezwe ezingafaka isicelo sokuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic noma nge-visa yabatshalizimali eCzech Republic?
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali kungasetshenziswa izakhamizi zanoma yiliphi izwe kepha izibonelo ezimbalwa ezokuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic kusuka e-Asia, ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic kusuka e-Afrika, ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic kusuka eYurophu, ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic kusuka eNingizimu Melika, ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic kusuka eMalaysia, ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic kusuka eBangladesh, ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic kusuka e-Indonesia, ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic kusuka eSri Lanka, ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic kusuka eNepal, Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic kusuka eNdiya kanye nokuhlala kabusha ngokutshala imali eCzech Republic kusuka e-UAE.
Ukuhlala Ochwepheshe Ngesiqondiso Sokutshalwa Kwezimali ye-Czech Republic
Cela ukubonisana kwamahhala kokuhlala kwakho ngokutshala imali eCzech Republic
Amagama abalulekile ku-Residency by Investment for Czech Republic
Xhumanisa UMnyango Wokufuduka KweCzech Republic , obhekene nokwakha izinqubomgomo zokusheshisa Ukuthuthela Kwelinye Izwe eCzech Republic